MELITE DIRECTX KA MBIPUTE KACHASỊ ỌHỤRỤ - DIRECTX - 2019
Tupu imelite ọbá akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-achọpụta ụdị mbipute a abanyela na usoro ahụ, yana chọpụta ma ihe ntanetị ahụ na-akwado mbipute anyị chọrọ iji wụnye.
Gụkwuo: Chọpụta version nke DirectX
Usoro nhazi DirectX abụghị kpọmkwem otu ihe ahụ dị ka imelite ihe ndị ọzọ. N'okpuru ebe a bụ ụzọ nrụnye na usoro sistemụ dị iche iche.
N'elu nke iri, ụdị nsụgharị nke ngwugwu ahụ dị na 11.3 na 12. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na mbipụta ọhụrụ bụ nke ọgbọ ọhụrụ 10 na 900 na-akwado. Ọ bụrụ na nkwụnye enweghị ike ịrụ ọrụ na Nri nke iri na abụọ, mgbe ahụ 11 eji ya. Nsụgharị ọhụrụ, ọ bụrụ na a tọhapụrụ ha, ga-adị na Windows Update Center. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike iji aka elele nnweta ha.
Gụkwuo: Nwelite Windows 10 na mbipute ọhụrụ
Na asatọ ahụ ọnọdụ. Ọ gụnyere mbipụta 11.2 (8.1) na 11.1 (8). Ọ gaghị ekwe omume ibudata ngwugwu ahụ iche iche - ọ dịghị adị (ozi si na weebụsaịtị Microsoft). Mmelite ahụ na-ewere ọnọdụ na-akpaghị aka ma ọ bụ aka.
Gụkwuo: Imelite Windows 8 arụmọrụ arụmọrụ
Ejiri asaa na ngwa ngwangwa DirectX 11, ma ọ bụrụ na SP1 arụnyere, mgbe ahụ enwere ohere ime ka melite na 11.1. A na-esipụta mbipụta a na ngwà ngwugwu nke sistemụ.
Mbụ ị ga-aga na ibe Microsoft ọrụ ma budata onye nhazi maka Windows 7.
Echefula na ihe ụfọdụ chọrọ faịlụ gị. Họrọ ngwugwu kwekọrọ na mbipụta anyị, wee pịa "Na-esote".
Gbaa faịlụ ahụ. Mgbe nchọta dị mkpirikpi maka mmelite dị ugbu a na kọmputa gị
ihe omume ahụ ga-agwa anyị ka anyị kwenye na ebumnuche ịwụnye ngwugwu a. Dị ka ọ dị, anyị kwetara site n'ịpị "Ee".
Mgbe ahụ, esote usoro nhazi ngwa ngwa.
Mgbe ịchichachara ya, ịkwesịrị ịmalitegharịa usoro ahụ.
Biko mara nke ahụ "Ngwa Ntuziaka DirectX" nwere ike ghara igosipụta mbipute 11.1, na-akọwa ya dị ka 11. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu ahụ bụ mbipụta zuru ezu na Windows 7. Otú ọ dị, ọtụtụ atụmatụ nke mbipute ọhụrụ ahụ ga-agụnye. Enwere ike inweta ngwugwu a site "Ebe Ntanetị Windows". Ọnụ ọgụgụ ya KV2670838.
Otu esi eme ka melite mmelite na Windows 7
Wụnye mmelite Windows 7 na aka
Ụdị kachasị nke Windows XP kwadoro bụ 9. Ntugharị ya emelitere bụ 9.0s, nke dị na weebụsaịtị Microsoft.
Nbudata na nwụnye bụ otu ihe ahụ na asaa. Echefukwala ịmalitegharia mgbe emechara.
Ọchịchọ nke inwe usoro DirectX kachasị ọhụrụ na usoro ya dị mma, ma nchịkọta nke ụlọ akwụkwọ ọhụụ na-enweghị ezi uche nwere ike ịkpata nhụsianya na-adịghị mma na ụdị mwepụ na glitches na egwuregwu, mgbe ị na-egwu vidio na egwu. Omume niile ị na-eme na ihe ize ndụ gị.
Ikwesighi igbali igbunye ngwugwu nke na-akwado os (lee n'elu), ebudatara na saịtị a juru anya. Ọ bụ ihe ọjọọ niile, ọ dịghị mgbe mbipute 10 ga-arụ ọrụ na XP, na 12 na asaa. Ụzọ kachasị dị irè na nke a pụrụ ịdabere na iji kwalite DirectX bụ iji nweta nkwalite maka usoro ọrụ arụmọrụ ọhụrụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Directx 2019